Naypyitaw – Page2– Department of Medical Service
Posted on April 24, 2019 by Author 2
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) နှင့်ဓါတ်ပုံ နေပြည်တော် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ ဇ၀နသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ သီရိရတနာလမ်းနှင့် သီရိမဏ္ဍိုင် လမ်းထောင့်၊ (မဟာသကျရံသီဘုရားသို့ သွားရာလမ်း)တွင် တည်ရှိပါသည်။ ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ အုပ်ချုပ်မှုဆောင်ဖုန်းနံပါတ် – ၀၆၇-၄၁၇၁၆၀ Fax No. – ၀၆၇-၄၁၇၁၆၀ ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ ( General / Speciality Units ) (က) မျက်စိကုသဌာန (ခ) နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းကုသဌာန ၄။ ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ မျက်စိပြင်ပကုသဌာန တနင်္လာနေ့ ပြင်ပလူနာကြည့်ချိန် နံနက်... Read More | Share it now!
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) နှင့်ဓါတ်ပုံ Location – ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ ဇဝနသိဒ္ဓိရက်ကွက်၊ သီရိရတနာလမ်း ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇ – ၄၁၇၀၃၂ Fax No ၀၆၇ – ၄၁၇၀၃၂ Email nptchildrenhospital@gmail.com ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ ( General / Speciality Units ) နေ့ရက်များ အကြောင်းအရာ အချိန် အရေးပေါ်နှင့် ပြင်ပလူနာကုသခြင်း (၂၄)နာရီပိတ်ရက်မရှိ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ သောကြာနေ့ အထူးကုပြင်ပလူနာကုသခြင်း နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီမှနေ့လည်(၁၂:၀၀)နာရီ အပတ်စဉ်... Read More | Share it now!
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) နှင့်ဓါတ်ပုံ ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ ဆေးရုံ ရုံးခန်းဖုန်း – 0673-420683 ဆေးရုံ Fax – 0673-421462 E mail address – npthospital1000bedded@gmail.com ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ ( General / Speciality Units... Read More | Share it now!